बोक्सीको आरोपमा यातना ः राज्यविरुद्धकै अपराध | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / बोक्सीको आरोपमा यातना ः राज्यविरुद्धकै अपराध
बोक्सीको आरोपमा यातना ः राज्यविरुद्धकै अपराध
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय March 13, 2018	0 87 Views
सुदूरपश्चिमको कै लालीमा बो क्सीको आरो पमा मरणासन्न हुने गरी एक किशो री कुटिएको घटना अहिले निकै चर्चामा छ  । १२ कक्षामा अध्ययनरत १८ वर्षीया ती किशो री बो क्सीको आरो पमा आफ्नै समुदायमा लगातार छ घण्टा निर्ममरुपमा कुटिइन् । ठूलो संख्यामा रहे का गाउँ समाजका ब्यक्तिहरुबीच उनीमाथि निर्मम प्रहार भै रह्यो  । मध्ययुगीन बर्बरता झल्कने , काल्पनिक कथाजस् तो लाग्ने यो घटना भर्खरै युवा उमे रमा प्रवे श गदैर् गरे की किशो रीले भो ग्न विवश भइन् । बो क्सीको आरो पमा ती किशो रीमाथि झाँक्री रामबहादुर चौ धरीले समाजलाई साक्षी राखे र लगातार कुट्नु, किशो रीमाथिको अत्याचारलाई गाउँ समाजका त्यतिधे रै मानिसले जिउँदो लाश बने र मौ न स् वीकृति दिनु र ताली बजाएर समर्थन गर्नुले आजका दिनमा पनि कायम रहे को हाम्रो समाजको रुढीग्रस् त मान्यता र अन्धविश्वासको गहिराई दे खाइदिएको छ । अकोर् सन्दर्भ, कै लालीमा बो क्सीको आरो पमा ती किशो री कुटिरहे कै समयमा दे शभर मात्र हो इन, विश्व नै त्यसदिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन व्यस् त थियो  । १०८ वर्ष पार गरे को महिला दिवसको उपलब्धि र आगामी कार्यभारका सम्बन्धमा बहस हुँदै थियो  । यो प्रसगंले उपरी तहमा महिला आन्दो लनले प्राप्त गरे का उपलब्धि विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलासम्म पु¥याउन सामाजिक रुढीग्रस् त मान्यता र अन्धविश्वासबिरुद्ध अझ धे रै काम गर्न बाँकी रहे को दे खाएको छ ।
कै लालीमा भएको त्यो घटनाले एकसाथ धे रै पक्ष उजागर गरे को छ । एक त समाजमा अझै पनि बो क्सीको आरो पजस् तो मध्ययुगीन सो च, चिन्तन र अन्धविश्वासले जरा गाडे कै छ । अकोर् कुरा बलियो ले निधोर् माथि गनेर् थिचो मिचो या भनौ ं कुनै एक व्यक्तिमाथि अकोर् ले दिने यातनाप्रति समाज अझै मूकदर्शक बन्न छाडे को छै न । त्यहाँ भएको अकोर् बिडम्बना, गाउँ समाजका व्यक्ति मात्र हो इन, झाँक्रीलाई उम्काउन प्रहरी र जनप्रतिनिधिले अगुवाई गरे  । शुरुमा पीडितका आफन्तले लिएर गएको उजुरी प्रहरीले लिन नमाने को मात्र हो इन, मिलापत्र नै गरिदिएर पठाइदियो  । मिलापत्र गराउन मे यर नै अग्रसर भए । यसले हाम्रा अगुवा, न्यायिक÷अर्धन्यायिक निकाय पीडितमै त्री छै नन् भन्ने कुरा फे रि पुष्टि गरे को छ । पछि विरो धको स् वर बढ्दै गएपछि झाँक्रीसहित कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको छ । उजुरी नलिने सईलाई निलम्बन गरिएको छ । मिलापत्र गराउन अग्रसर भनिएका घो डाघो डी नगरपालिकाका मे यर संलग्न राजनीतिक दलले घटनाको अनुसन्धानका लागि समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री स् वयंले अपराधी कसै ले पनि उन्मुक्ति नपाउने र पीडितको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहो नेर् घो षणा गरिसके का छन् भने सात नम्बर प्रदे शका मुख्यमन्त्रीको समे त प्रधानमन्त्रीको जस् तै प्रतिबद्धता आइसके को छ । सिंगो राज्यको ध्यान ताने को र बो ल्न बाध्य पारे को यस घटनामा सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता ब्यवहारमा लागु हो उन् र विगतमा जस् तो अनुसन्धानका नाममा दो षीलाई उन्मुक्ति दिने खे ल नदो हो रियो स् भन्ने मा सचे त नागरिकको निरन्तर खबरदारी जरुरी छ ।
धामी, झाँक्री बो क्सी आदि अन्धविश्वासका आधारमा गरिने अमानवीय क्रियाकलाप हुन् । यी कुनै किशो री महिलामाथि भएका जघन्य हिंसाका घटना मात्र हो इनन्, राज्यबिरुद्धका अपराध नै हुन् । यस् ता घृणित घटना दे शभरका सबै समाजबाट सदाका लागि अन्त गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि ओ ठे प्रतिवद्धताले मात्र पुग्दै न । राज्यका यति धे रै संयन्त्र छन् । राजनीतिक दलका वडासम्म पुगे का समितिहरु छन् । गै रसरकारी क्षे त्र छ । राजनीतिक रुपले मुलुक धे रै अगाडि बढे पनि सामाजिक सांस् कृतिकरुपले किन यतिविधि पछाडि प¥यो ? राजनीतिक परिवर्तनका ने तृत्वकर्ता राजनीतिक दलका ने ता तथा कार्यकर्ता किन रुढीवाद र अन्धविश्वासको दलदलबाट बाहिर आउन सके नन् ? आजसम्म भएका कामको समीक्षा गरी सबै क्षे त्रका कार्यशै ली फे रिनु जरुरी छ । सही र गलत, विश्वास र अन्धविश्वास यति पनि छुट्याउन सक्ने विवे क दिन सक्दै नौ ं भने हामीले आजसम्म दिएको शिक्षा, सचे तना सही छै न भन्ने बुझ्नुपर्छ । धामी, झाँक्री र बो क्सी आदि अन्धविश्वास कुनै धर्मसँग जो डिएका विश्वास हो इनन्, बरु आधुनिक समाजको कलङ्क हो  । संसारसामु यस् ता कुरीतिले ने पालीको शीर लज्जाले निहुरिन्छ । निहुरिएको छ । यस् ता सबै खाले अन्धविश्वास र कुरीतिलाई सदाका लागि विदा गर्न सबै ले जिम्मे वार भएर आ आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरौ ं ।
Previous: बबई सभ्यता र हाम्रो संकल्प
Next: मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व,द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहतका लागि योजना निर्माणमा जोड